Ururka ONLF waxaa la Aas-aasay sanadkii 1984. wuxuu halganka hubaysan billaabay sanadkii 1994. ujeeddada loo Aas-aasay Ururka waa inay dadka Soomaaligalbeed (Ogaadeeniya) helaan Aayo-katashi. | ogaden24
Ururka ONLF waxaa la Aas-aasay sanadkii 1984. wuxuu halganka hubaysan billaabay sanadkii 1994. ujeeddada loo Aas-aasay Ururka waa inay dadka Soomaaligalbeed (Ogaadeeniya) helaan Aayo-katashi.
Muddadii uu Ururku jiray wuxuu soo maray marxalado isugu jira dibu-dhac iyo horu-kac si waafaqsan sunnada rabbaaniga ah, Maanta oo la joogana Ururku wuxuu ku jiraa mid kamida marxaladahaas. Sidoo kale Ururku muddadii uu jiray wuxuu qaatay go’aammo togan oo la mahadiyey iyo kuwo taban oo dibu-dhac u horseeday halganka (laakiin xilli ku habboon aan ka faalloon-doonno -insha allaah – labada dhinacba si gaar ah dhinaca taban).
Meel-fog uma socdee, habeen dhawayd ayuu nin Soomaaliyeed oo aan muddo dheer saaxiibo ahayn oo malaha ku dhaga-barjoobay dhaq-dhaqaaqa Sirdoonka Itoobiya ee geeska Afrika, kala daadsanaanta Soomaalida iyo muuqaalada mu’aamaradda ah Ee horumarka beenta ah ku saabsan Ee maamulka dabadhilifka ah Ee Jig-jgiga Tiifiigiisa kasocda ayaa iwaydiiyey “Ina Aw-caliyow bal kawarran xaaladda gobalka Ee xilligan?” Intii suurtagal ah waxaan u sheegay meesha xaal marayo oo nuxurkeedu ahaa inay dadkaasi taariikhda meeshii ugu xumayd joogaan laakiin waxaan ugu lab-qaboojiyey inay filasho wanaagsani jirto.
Markale wuxuu Iwaydiiyey “waxaad iiga warrantaa xaaladda Ururka ONLF, Itoobiya se ma lagayaabaa inay si kama dambays ah uga guulaysato Ururkan Soomaaliyeed Ee gobanima-doonka ah?”
– Su’aashiisa qaybta hore Ee ah “iiga warran Ururka ONLF” waxaan usheegay in Ururku tan iyo markii la aas’aasay ay lasoo gudboonaadeen caqabado waawayn oo tiro badan laakiin intoodii badnayd kasoo gudbay (ha jiraan dhaawacyo iyo dibu-dhac soo gaadhay laakiin loooma hakanin) Maantana waxaan u sheegay inay caqabado badani horyaallaan Ururka laakiin rajadu tahay inuu ka gudbo isagoo kaashanaya, kana faa’iidaysanaya waayo’aragnimadiisa muddadii dheerayd Ee uu jiray iyo duruufihii uu soo maray.
– Isla su’aasha qaybteeda labaad Ee ah “Ma laga yaabaa inay Ethiopia ka guulaysato ONLF?” waxaan u sheegay in wixii mustaqbalka dhici-doonaa yihiin sir ilaahay – Swt – u gaar ah, haddii se aan xog’ogaalnimo odoroso ma filayo inay Itoobiya ka guulaysan-doonto halganka Soomaaligalbeed/Ogaadeeniya sababtoo ah waa halgan taageero shacab kusocda, haddii se ay dhacdo arrintaasi – Magan allee – kuma dhicidoonto sabab Itoobiya xaggeeda ka timid ee waxay ku dhici-doontaa sabab ONLF lafteeda ka timid.
Wuxuu yidhi “ONLF saw lama wiiqin xooggoodii ciidan, Itoobiya se saw ma’aha dowlad xoog dhaqaale, ciidan iyo siyaasadeed leh sidee loo baciidsan karaa inay Ururka ONLF ka guulaysto?” Waxaan ku idhi: ONLF nimanka la yidhaahdo loogama adkaan karo tabar-yari laakiin waxaa looga adkaan karaa oo kaliya talo-xumo xaggooda ka timid. wuxuu yidhi “faah-faahi arrintaa?” laakiin faah-faahintii halkan kuma soo koobi karno qofkii se jawaabta kooban fahmaa faah-faahintana wuu fahmi – Insha allaah, kii kalana Danleeydu haw sharaxdo.
Wuxuu yidhi “Awooddii ciidan Ee sanadkii 2007 ONLF lasoo baxday maxaa ku dhacay?” Waxaan waydiiyey bal inuu garanayo meeshay ONLF awooddaas markii hore ka keentay? kadib waxaan saaxiibkay u sheegay in Ururka ONLF xooggiisa gudaha laba arrimood sabab u yihiin:
1. Ururku wuxuu dadka gobalka 75% ka helay aqbalaad/Ogolaansho heerkeedu sarreeyo, taasoo keentay inay shacabku noqdaan; keydkooda ciidan, ishooda dhaqaale iyo hay’ad wardoon oo si joogta ah dagaalyahanka ururka uga caawisa xogaha iyo dhaq-dhaqaaqa ciidanka cadowga.
2. Arriin kale oo xiisa lihi, waa dhaqanka lagu carbiyey dagaalyahanka Ururka oo kudhisan adkaysi qayru-caadi ah iyo mintidnimo (2 Nin hadday yihiin iyo hadday 2 kun’ yihiin, hadday 20 midh oo rasaasa haystaan iyo hadday 2 milyan haystaan, hadday gaajo kaw yihiin iyo hadday darab geel quutaan waligood kamayna shakiyin hadafkooda, taariikhdana laguma hayo 2 nin oo dagaalyahanka Ururka ka tirsan oo intay meel ku faqeen hadafka Uururka su’aal galiyey ama ku heshiiyey inay Itoobiya isu dhiibaan) dhaqankaas soogtanida iyo mayal-adayga ah ayaa cidwalba oo xoog leh quus galiya marka ugu dambaysa.
Ugu dambayna waxaan u sheegay inay labadaa arrimood oo fursad helay soo saareen xooggii 2007, waxaan u sheegay anigoo xog-ogaalnimo hadlaya inay maantana ONLF haysato labadaa arrimood laakiin fursadihii xoojin lahaa hoos u dhiceen, berri (24 saac kadib) hadday fursadihii yimaaddaanna hubaal xoogga ONLF ee guduhu halkii uu 2007 joogay wuu kor maridoontaa muddo bilooyin ah. fursaduna mararka qaarkood waa cir kasoo dhac, sida tan Ethiopia ka socda oo kale.
Aan xog-yar idiinku kabee, Hay’adda Sirdoonka Itoobiya iyo Waaxda Military-ga Itoobiya u qaabilsan sirdoonka oo si joogto ah daraasaad iyo daba-gal ugu sameeya Ururka iyo dhaq-dhaqaaqiisa gudaha iyo dibadda waxay Saraakiiishoodu 85% ku qanacsan-yihiin isla aragti ka agdhaw taan kor ku sharaxay oo ah “In Ururka ONLF la wiiqi-karo awooddiisa lana xakamayn-karo dhaq-dhaqaaqiisa waddanka iyo geeska Afrika laakiin aan marnaba si xoog ah oo kama dambays ah looga adkaan karin”..